Miyay Maamulka Man United Diyaar U Yihiin In Ay Real Madrid Kaga Aarsadaan Rabitaankooda Pual Pogba Kadib Khilaafkii Hore Suuqa Ugu Soo Dhex Maray? - Gool24.Net
Miyay Maamulka Man United Diyaar U Yihiin In Ay Real Madrid Kaga Aarsadaan Rabitaankooda Pual Pogba Kadib Khilaafkii Hore Suuqa Ugu Soo Dhex Maray?
Real Madrid ayaa doonaysa in ay wax walba u samayso saxiixa Pual Pogba si uu ugu biiro saxiixyada ay xagaagan Madrid samaysay oo kala ah Rodrygo, Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard iyo Ferland Mendy.
Laakiin Manchester United ayaa meel adag iska taagtay in Pual Pogba uu ku biiro kooxda Real Madrid iyada oo saamaynta khilaafkii hore ee suuqa ku soo dhex maray kooxaha Madrid iyo Manchester United.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa shaaciyay in Manchester United ay kubbad adag la ciyaari doonto Real Madrid isla markaana ayna ka soo degi doonin qiimaha 170 milyan yuro ah oo ay dul dhigeen xidiga reer France.
Manchester United ayaa sidoo kale ka baxday xiisihii ay Real Madrid fursada ku heli kartay ee ay United ku doonaysay saxiixa Gareth Bale taas oo sii adkayn doonta in wada xaajoodka United iyo Madrid horumar laga samayn karo.
Real Madrid ayaan ciyaari karin fursadii ay Chelsea ugu qasabtay iibka Eden Hazard maadaama oo aanu heshiiska Pual Pogba ee Man United ahayn mid dhamaad galay, waana sabab wayn oo ay Madrid ku seegi karto saxiixa Pogba.
Maamulka Ed Woodward iyo Florentino Perez ayaa si xun saxaafada iskugu weeraray xagaagii 2015 kii markii uu fashilmay heshiiskii dhamyska tirnaa ee uu De Gea ugu biirayay Madrid laakiin marar dhawr ah oo ay kadib United isku dayday in ay ciyaartoy kala soo wareegto Los Blancos ayaa diidmo cad u muujisay.
Markii uu Jose Mourinho joogay waxaa Manchester United si xoogan loola xidhiidhinayay Gareth Bale, Raphael Varane iyo Toni Kroos laakiin dhamaantood waxay ku dhamaadeen fashil.
Manchester United ayaan markeeda doonayn in ay xidiga kooxdeeda ugu fiican u gacan galiso koox ay suuqa iyo tartamada Yurub ku xifiltamaan inkasta oo ayna xili ciyaareedkan isku tartan ku jirin.
Real Madrid ayaan doonayn in ay Pual Pogba ku iibsato 170 milyan maadaama oo ay haddaba sare u dhaaftay in ka badan 300 milyan yuro, waxayna sidoo kale Madrid ku qasban tahay in ay lacag 270 milyan ah ka samayso iibka ciyaartoyda kooxdeeda.
Real Madrid ayaa hadda kooxdeeda kowaad ku haysata 37 ciyaartoy waana tiro aad uga badan 23 ka xidig ee uu Zidane doonayo in uu ku shaqeeyo xili ciyaareedka cusub taas oo keeni doonta in la iibin doono ilaa 14 xidig oo Madrid hadda jooga.
Si kastaba ha ahaatee, Mancheser United ayaa meel adag iska taagtay in Paul Pogba uu ku biiro kooxda Real Madrid ama ay Los Blancos bixiso lacag 170 milyan yuro ah.